YONKE INTO EKUFUNEKA UYAZI MALUNGA NOTSHINTSHO LWENGUBO YOMTSHATO - IFASHONI
Eyona Ifashoni Yonke into ekufuneka uyazi malunga notshintsho lwengubo yomtshato
Yonke into ekufuneka uyazi malunga notshintsho lwengubo yomtshato
Nje ukuba uyifumene ingubo yakho, yise kumbonisi onokuyilungela ngokugqibeleleyo kumzobo wakho. Nantsi into ekufuneka uyazi ngaphambi kokuba uhambe. UKULUNGELELA Ukuhlaziywa ngoJuni 08, 2018
Nokuba uyifumene ilokhwe yakho yomtshato kwaye utyikitye kumgca wamachaphaza ukuyenza ngokusemthethweni yeyakho, awukakulungeli ukuya ezantsi okwangoku. Uninzi lweengubo zifuna uhlobo oluthile lotshintsho, kwaye ubukhulu bomsebenzi bunokwahluka kakhulu, kuxhomekeka ekubeni uyithenge phi ingubo yakho kwaye zingaphi iinguqu ekufuneka zenziwe. Eyona nto ibalulekileyo ekufuneka uyigcinile sisicelo esisebenza ngamandla, ixesha kunye nemali ekufuneka uyivumele ngenkqubo yokwenza ilokhwe yakho yamaphupha. Ngoncedo lomthungi oqeqeshiweyo okanye umthungi, uyakulungela usuku lwakho lomtshato ngesinxibo esivumelana nomzimba wakho ngokungenasiphako.
Kubalulekile ukuba ixesha lakho litshintshe ngokufanelekileyo. Ukuba uzisa isinxibo sakho kwangoko kakhulu, awunakuphela ulungile ngokufanelekileyo. (Ungaphulukana nobunzima okanye umzimba wakho emva kokuba utshintshiwe, nto leyo inokuchaphazela inkangeleko yelokhwe iyonke kwaye ilingane.) Zisa ingubo yakho emva kwexesha kakhulu, kwaye uzibeka emngciphekweni wokungavumeli ixesha elaneleyo lokuba umthungi asebenze umlingo wabo. Sincoma ukuvumela iinyanga ezimbini ukuya kwezintathu ukusuka kulungelelwaniso lwakho lokuqala ukuya kwelokugqibela njengexesha elifanelekileyo lokwenza lonke utshintsho. Kwakhona gcinani engqondweni ukuba inani lamaxesha ekufuneka uye kuwo elilinganisiweyo lixhomekeke ekubeni usenza malini na kwigawuni- ngokomndilili, uninzi lwabatshakazi luya kulungiselelwa izinto ezintathu okanye ezine.
ndimfumana ntoni umyeni wam kwisikhumbuzo sethu sokuqala
Ukuba uthenge ingubo yakho kwi-salon yomtshato, unokufumana utshintsho olwenziwe apho. Kungenzeka ukuba i-salon ayinakho ukubonelela ngotshintsho, kwimeko apho kuya kufuneka uye kumthungi okanye umthungi ojolise kwiigawuni zomtshato. Buza i-salon ukuba baneengcebiso-baya kuba nakho ukukubonisa kwipro pro enkulu. Kwaye khumbula ukuba ayingomsebenzi wokucoca indawo yakho eyomileyo, ngaphandle kokuba bayabazi ubunzima bokunxiba okusesikweni. Iigawuni zomtshato zineenkcukacha ezininzi ezintsonkothileyo-ukubonisana, ihemms, ukuxakeka njalo njalo-ukuba kungcono ufumane ingcali eye yabonwa kwaye yasebenza kwezi zinto zegown ngaphambili.
Yintoni oza nayo
Xa usiya kuthungelwano okanye isalon, yiza ngaphezulu kunesinxibo sakho (kanye njengokuba ubuyokwenza uyokuthenga ilokhwe yomtshato) -thabatha iingubo zakho zangaphantsi, izihlangu kunye nezinto zokuya kufakela nazo. Ngawo onke amaqhekeza akhoyo, kuya kuba lula ukubona usuku lwakho lomtshato lujongeka. Izambatho zakho zangaphantsi kunye nezihlangu ziya kuqinisekisa ulingano olufanelekileyo kunye nobude bengubo yakho, kwaye izixhobo zakho zeenwele okanye ikhuselo ziya kukunceda ugcine ukulingana okufanelekileyo. Ukuba awunaso esona sihlangu uza kusinxiba, yiza nento efanayo ukuphakama.
Ngubani ozohamba naye
Ngelixa unokuba nemikhosi yomtshakazi, ayiyongcamango ilungileyo ukuzisa wonke umntu kwizinto zakho, kodwa ngokuqinisekileyo uya kufuna ukuba umntu eze nawe. Cinga ngokumema umama wakho, esinye isihlobo esithembekileyo okanye umhlobo ukuba akukhaphe kulungiselelo lwakho loluvo lwabo oluthembekileyo nolunye useto lwamehlo. Kwaye ngenxa yokuba isicakakazi sakho sembeko siya kudinga ukwazi ukuba masenze njani ukuhamba, licebo elilungileyo ukumzisa kulungelelwaniso lwakho lokugqibela ukuze afunde ukuba ilokhwe yakho isebenza njani kwipro.
Nokuba uyifumene ingubo yakho kwi-couture salon okanye kwintengiso yesampulu yomtshato, ukhetho lokutshintsha phantse alunasiphelo. Abathungi abaninzi abasebenza kwiigawuni zomtshato basebenzise ukuphinda basebenze amalaphu kunye nokuvula iihempe, kwaye banokuyila kwakhona ilokhwe. Oku kuqheleke ngakumbi xa umtshakazi efuna ukwenza ingubo kanina ibe yeyala maxesha-umthungi angasebenzisa ilaphu elinye kodwa enze isitayile esihlaziyiweyo.
Usafuna ilokhwe yakho yomtshato? Thenga kwii-salon zomtshato ezikufutshane nawe.
vula umbono wekhitshi
iilokhwe zomtshato ezizodwa ezimnyama nezimhlophe
iinkuni tile umgangatho ekhitshini
las vegas umtshato kunye neephakeji zokwamkela
Ungasusa njani induna embi